Falaqaynta Ciyaaraha:-Tolow Yaa Ku Guulaysan Doona 3dan Laacib Bilada Qaaliga ah eeBallon D*Or? - Cakaara News
Khuburada Fifa ayaa Qalinka ku Duugay liis ka kooban23 ka Mida Ciyaartoyda Aduunka ee la Filan karo ama u sharaxan Qaadashada Bilada Qaaliga ah ee lagu magacaabo Ballon d*Or Liiskii Dheeraa ee Musharixiinta 23ka Ciyaartoy ayaa wakhti-xaadirkan maraya ka dib xulasho danbe oo la sameeyay isku soo hadhay 3dan Xidig kaliya oo kala ah (Messi,Ribery iyo Cristiano Ronaldo).
Ribery ayaa 2-dan cayaartooy ee la tartamaysa waxaa uu u heystaa guulo badan oo marka miisaan la saaro lagu xulan karo inuu ku guuleysto biladan,madaama 3-Koob oo qaali ah Dalkiisa Farance u sahlay inay Koobka Aduunka u soo baxaan.
Messi ayaa isagu kooxdiisa Barcelona ka caawiyay inay ku guuleystaan Koobka La-Liga,walow uu mudooyinkii ugu dambaysay ku maqnaa dhaawac soo gaadhay.
CristianoRonaldo ayaan isagu heysan wax Koob ah oo lagu miisaami-karo,laakiin wuxuu sanadkii hore iyo sanadkanba muujiyay cayaar-wanaag,waxaana intaas u dheer waa Laacib ay aad u buun-buuniyeen Saxaafadaha,waxaana dhici karta sidii la arki jiray badanaa qofka ay saxaafadda buun-buuniso in Biladan uu ku guuleysto.
Cidii ku guuleysata abaalmarintan Qaaliga ah waxaa magaciisa lagu shaacin-doonaa,xafladda ka dhici-doonto 13-ka bishan Janauary magaaladda Zurich ee Dalka Switzerland.